» अजिता हत्या प्रकरणः १ लाख धरौटी तिर्न नसक्दा एलिशा कारागार चलान
अजिता हत्या प्रकरणः १ लाख धरौटी तिर्न नसक्दा एलिशा कारागार चलान
२०७६ फाल्गुन १९,सोमबार १७:५३
२० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अजिता हत्यामा संलग्न भएको अरोपमा एलिशासहित अन्य ४ जनालाई सार्वजनिक गर्दै । तस्बिरः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर
हेटौंडा, १९ फागुन । जिल्ला अदालत मकवानपुरले हेटौंडाकी तेस्रोलिङ्गी अजिता भुजेलको हत्या गरेको आरोपमा ५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
अजिता हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकी हेटौंडा–११ बस्ने २१ वर्षीया एलिशा पाख्रिनलाई अदालतले १ लाख धरौटीमा लिइ रिहा गर्न आदेश दिएको छ । तर, एलिशाले १ लाख धरौटी तिर्न नसक्ने बताएपछि उनलाई चितवन कारागार चलान गरिएको छ ।
अजिता हत्यामा संलग्न एक व्यक्ति एलिशाको साथी थिए । उनै साथीले अजिताको मोबाइल एलिशालाई उपहार दिएका थिए । एलिशाले उक्त मोबाइलमा सिम हालेर चलाउँदा अनुसन्धानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । एलिशाबाटै सबै हत्या आरोपीहरु समात्न प्रहरी सफल भएको थियो ।
४ माघ बिहान हेटौंडाको क्याम्पाडाँडामा मृत फेला पर्नु भएको अजिता भुजेलको हत्या यौन सम्पर्कपछि रकम बार्गेनिङ (विवाद)को करणले भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको थियो । अजितालाई थानाभर्याङस्थित ट्रकमा आरोपीहरुले यौनसम्पर्क गरी पैसामा विवाद भएपछि तारले घाँटी च्यापेर हत्या गरिएको प्रहरीसँग साविती बयान दिएका थिए ।
आज सोमबार जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टको एकल इजलाशले अजिता हत्यामा संलग्न रहेका ५ जनालाई पुपक्र्षका लागि भीमफेदी करागार पठाउन र एलिशालाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले बताउनु भयो ।
अजिता अत्या आरोपी हेटौंडा–४ बस्ने २४ वर्षीय आशिष बल, हेटौंडा–१४ घर भएका २१ वर्षीय हम्चर भन्ने बुद्ध लामा, हेटौंडा–९ बस्ने १८ वर्षीय भापु भन्ने सिमोन परियार र हेटौंडा–४ का घनटाउके भनिने सुशिल थापा मगर र सोनम गोलेलाई पुर्पक्षका लागि भीमफेदी कारागार चलान गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले जानकारी दिनु भयो ।
प्रहरीले सोनमलाई अजिता हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पछि समातेको हो । प्रहरीले हत्या अरोपी सार्वजिनक गर्दा एलिशासहित ४ जनालाईमात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।
यसरी फसिन् एलिसा
१६ दिनसम्म हत्यामा संलग्न भएकाहरुसम्म प्रहरी पुग्न सकेको थिएन । २ सय ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिसँग प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो ।
प्रहरी बाटो हेर्दै थियो, अजिताको हराएको मोबाइल कहिले अन हुन्छ ? २० माघ सोमबार प्रहरीले मोबाइल अन भएको सूचना पायो । अजिताले रातो रंगको ओप्पो मोबाइल बोक्ने गरेकी थिइन् ।
सोमबार मोबाइल अन भएपछि प्राविधिक अनुसन्धानबाट मोबाइल बोक्ने व्यक्तिसम्म प्रहरी पुग्यो । प्रहरीले हेटौंडा–११ बस्ने २१ वर्षीया एलिशा पाख्रिनको साथबाट उक्त मोबाइल बरामद गर्यो । एलिसाले सिमकार्ड हालेर मोबाइल अन गरेपछि प्रहरीले एलिसालाई पक्राउ गर्न समय लगाएन् ।
घटना क्रम हेर्दा अजिता हत्याका अभियुक्तहरुले उनको मोबाइल एलिसासम्म पुर्याएका थिए । आफ्नै साथी आशिषले दिएको मोबाइलको कारण एलिसालाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्यायो ।
पाख्रिनसँग अजिताको मोबाइल कसरी आइपुग्यो ? अनुसन्धान गर्दैजाँदा अजिता हत्यामा संलग्न रहेका हत्या आरोपी आशिष बलले उनलाई मोबाइल दिएको अनुसन्धानबाट खुल्यो ।
आशिषलाई पक्राउ गरेर सोध्दा हक्चर भनिने बुद्ध लामाले मोबाइल दिएको प्रहरीले पत्ता लगायो । लामालाई चितवनबाट पक्राउ गरी प्रहरीले सोधपुछ गर्दा अर्का व्यक्ति भापु भिनने ना ६ ख ६५२७ नम्बरको आइचर ट्रकका सहचालक सिमोन परियारले दिएको बताए ।
त्यसपछि प्रहरीले सिमोनलाई पक्राउ गर्यो । अजिताको सोही आइचर ट्रकमा हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । सिमोनलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले अजिता हत्याको १७ दिनपछि हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।
हेटौंडाको क्याम्पाडाँडामा नवलपुरकी अजिता मृत फेला
अजिता प्रकरण : घाँटीमा बिजुलीको तार बेरेर हत्या
अजिता प्रकरण : हेटौंडा अस्पतालले शव पोस्टमार्टम गर्न नमानेपछि काठमाडौं पठाउँदै
अपडेट– अजिताको शव क्याम्पाडाँडामा, स्कुटर थानाभर्याङमा
हेटौंडाकी तेस्रोलिंगी अजिताको बलात्कारपछि हत्या
हेटौंडाकी अजिता भुजेलको हत्या आरोपमा ५ जना पक्राउ
अजिता प्रकरणः हत्याराको नजिक पुग्दै मकवानपुर प्रहरी
अजितासँग ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्ने फरार !
अजिताको हत्या निर्मलाको जस्तो गुपचुप नहोस् (भिडियो समेत)
यी हुन् अजितासँग ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्ने फरार युवक !
अजिता हत्या प्रकरणः अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट प्रहरीको विशेष टोली
हेटौंडाकी अजिताको त्यो सपना जस्को उनीसँगै ‘हत्या’ भयो
मृतक अजिता, भुजेलबाट कसरी भइन् घिसिङ ?
अजिता हत्या प्रकरणका अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै
४ जना मिलेर अजिताको हत्या, अभियुक्तहरु सार्वजनिक
यौन सम्पर्कपछि रकम बार्गेनिङले लियो अजिताको ज्यान
अजिताको हराएको फोन खुलेपछि एकैदिन यसरी समातिए हत्या आरोपी
अजिता हत्या प्रकरणः अभियुक्तको बयान बाझियो, एसपी राठौरले पत्याएनन्
अजिताको मोबाइल अन भएपछि फसिन् एलिसा
हेटौंडाकी अजिताको हत्या आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश
पहिरोले पुरिएर मकवानपुरका खनालको मृत्यु
हेटौंडाको क्याम्पाडाँडा हत्याकाण्ड- खुलेन रहस्य
हेटौंडाको क्याम्पाडाँडा : एकपछि अर्को ‘हत्या काण्ड’
हेटौंडाको क्याम्पाडाँडामा शव कुहिएको अवस्थामा फेला
हेटौंडाकी अजिता भुजेल हत्यामा संलग्नलाई दोस्रो पटक म्याद थप